२९.२४ अंकले बढ्यो शेयर बजार, १५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
साउन १२, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २९ दशमलव २४ अंकले बढेर ३ हजार ७९ दशमलव ६७ विन्दुमा पुगेको छ ।
यो दिन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस दिन नेप्से हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो । यस अघि साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेले हालसम्मकै ऐतिहासिक रेकर्ड ब्रेक गरी ३ हजार ५८ दशमलव ६३ विन्दुमा बन्द भएको थियो । सोमवार ८ दशमलव २४ अंक घटेर ३ हजार ५० दशमलव ४२ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से मंगलवार ३ हजार ३० दशमलव ५१ विन्दुदेखि खुलेको थियो ।
कारोबार खुला भएको पाँच मिनेटको अवधिभित्र नेप्से परिसूचक ३ हजार २ दशमलव १० विन्दुसम्म झरेको थियो । यो दिन कारोबारको साढे २ घण्टाको अवधिपश्चात बजार उकालो लागेको हो । यस दिन बजार ३ हजार ८५ विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षलाई विदा गरिसकेको बजारका लगानीकर्ताहरुले अव वर्षभरिको लगानीको प्रतिफल भित्र्याउने बेला भएको तर्क गरेका छन् । यस अवधिमा आफ्नो खर्च टार्नकै लागि शेयर विक्री गरेपनि अन्य प्रयोजनका लागि विक्री गर्ने कम रहेको जानकारी लगानीकर्ताहरुले दिएका छन् ।
यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ३ दशमलव १९ अंकले बढेर ५७४ दशमलव ३० विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार रकमको उच्चता कायम राख्दै मंगलवार रू. १५ अर्ब १७ करोड ६ लाख ५१ हजार बराबरको ३ करोड २३ लाख ५५ हजार २६० कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यो कारोबार २२५ ओटा कम्पनीको १ लाख ४१ हजार ६५२ पटकको व्यापारमा भएको हो ।
यस दिन सबैभन्दा बढी रकमको शेयर कारोबार एनआईसी एशिया बैंकको भएको छ भने कित्ताको हिसावमा लक्ष्मी उन्नति कोषको सर्वाधिक इकाई कारोबार भएको छ । यो दिन एनआईसी एशिया बैंकको रू. ४९ करोड ४ लाख ३४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ५४ कायम भएको छ । यो दिन रू. १ हजार ३२ मा खुलेको कम्पनीको शेयरमूल्य न्यूनतम रू. १ हजार १२ देखि अधिकतम रू. १ हजार ७१ सम्म पुगेको थियो ।
त्यस्तै २५ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन लक्ष्मी उन्नति कोषको सर्वाधिक कित्ता इकाई कारोबार भएको छ । यस दिन कोषको १५ लाख ५८ हजार १४७ इकाई खरीदविक्री भएको हो । कोषको प्रस्तावित करसमेत २५ प्रतिशत लाभांश साउन १२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मंगलवार उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक सर्वाधिक ४ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ भने लघुवित्तको सर्वाधिक २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा बढेको छ । मल्टिपर्पस फिनांस, खानीखोला हाइड्रोपावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स, जोशी हाइड्रो र घलेम्दी हाइड्रोको शेयरमूूल्य यस दिन १० प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकी आठ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।